Soosaarka Warshadda Dufcadda La Taaban karo ee Shiinaha Shiinaha | Jusheng
Warshadda isdabajoogga ah ee la taaban karo ee moobiilku waa naqshad jiingad lagu dhejiyo Qalabka wax lagu kala qaado, qasacad la taaban karo, nidaamyada miisaanka, qalabka wax lagu kala wareejiyo iyo silsiladda sibidhka ayaa si heer sare ah loogu dhexgaley cutub isteerinka lagu rakibay, kaas oo ah qaab dhismeed muhiim ah. gebi ahaanba ku xiran warshadda, taas oo yaraynaysa waqtiga rakibidda iyo hawlgallada tijaabada ee warshad batching la taaban karo.
Shayga Cutub MHZS60
Wax soosaarka aragtida m³ / h 60
Soosaarka fiicni m³ 1.0
Nooca quudinta Quudinta Suunka
Qaabka bakhaarka PLD1200-Ⅲ
Batcher (qaddarka qashinka) m³ 12X2
Awooda fiicni kw 22X2
Awood qaadista kw 7.5X2
Dhererka dheecaanka m 3.9
Max miisaanka & Saxnimada Isugeyn kg 2500 ± 2%
Wax budada ah kg 600 ± 1%
Biyaha kg 250 ± 1%
Waxyaabaha lagu daro kg 20 ± 1%
Shayga Cutub MHZS75
Wax soosaarka aragtida m³ / h 75
Soosaarka fiicni m³ 1.5
Qaabka bakhaarka PLD2400-Ⅲ
Batcher (qaddarka qashinka) m³ 15x2
Awooda fiicni kw 30x2
Awood qaadista kw 11x2
Dhererka dheecaanka m 3.8
Max miisaanka & Saxnimada Isugeyn kg 3000 ± 2%
Wax budada ah kg 800 ± 1%
Biyaha kg 350 ± 1%
1. Naqshadeynta qaabdhismeedka istiraatiijiga ah, oo ku urursan qaybo badan oo ka mid ah saldhigyada isku dhafan ee ku jira hal cutub trailer;
2. Habka hawlgalka aadanaha, shaqo deggan oo lagu kalsoonaan karo, hawlgal xasilloon oo ka jira deegaanno kala duwan oo qalafsan;
3. Dibedda laga keenay Mashiinka la taaban karo ee mataanaha-shaft (meeraha meeraha ah ayaa sidoo kale la isticmaali karaa), kaas oo si joogto ah u socon kara, si siman isugu qasmi kara, isla markaana si xoog leh oo dhakhso leh isugu qasmi kara; waxaa lagu dhammaystiri karaa muddo gaaban. Wixii la taaban karo oo adag, shamiito adag oo adag, caag ah iyo heerar kala duwan oo shub ah, si fiican ayaa loogu qasi karaa.
4. Warshadda oo dhan si dhakhso ah ayaa loogu qaadi karaa goobta dhismaha oo lagu ururin karaa goobta iyada oo loo marayo foomka buuxa;
5. Hawl-gelinta hore ayaa la dhammaystiray ka hor dhalmada, dhismahana waa la fulin karaa iyada oo aan la hawlgelin;
6. Qaabeynta casriga ah, heer sare ee otomaatiga, dhaqdhaqaaq dabacsan oo ku habboon, hawl fudud oo deggan.
Qaab dhismeedka ugu weyn ee warshad batching la taaban karo mobilada loo qaybiyaa saddex qaybood: nidaamka xakamaynta, lakabka isku qasidda iyo lakabka miisaamidda batching.
Barxadda lakabka isku darka waxaa laga sameeyaa qaab dhismeedka bir ah oo leh labalaab doorsoome ah I-qaabeeya dogob weyn, kaas oo ka culus oo leh adkeyn iyo ka-nuugid naxdin leh marka loo eego qaab dhismeedka caadiga ah. oo leh aasaaska, taas oo si wax ku ool ah u yareyneysa gariirka ka imanaya isku dhafka la taaban karo; taageerada waxay qaadataa lugaha leydilaadka, oo aan fududeyn oo kaliya qaab dhismeedka, laakiin sidoo kale ku waasac bannaan.
Qolka kontoroolka waxaa ku wareegsan daaqado, kuwaas oo ku xiran jirka ugu muhiimsan ee warshadda isku dhafka shubka, waxaana loo qaabeyn karaa inay ahaato dherer la mid ah lakabka isku darka. Barxadda socodka ee lakabka isku-qasku wuxuu ka samaysan yahay shabag bir ah, taas oo ku habboon la socodka waqtiga ku habboon ee soo-saarka iyo soosaarida martida isku-dhafka ah. Kahor bixitaanka warshadda, nidaamka xakamaynta waxaa loo ekeysiiyey oo la khalday oo ay ku xiran yihiin isku xirayaasha duulimaadyada, taas oo yaraynaysa shaqada rakibidda goobta iyo suurtagalnimada in la fashiliyo. Looma baahna in dib loo kala furfuro oo la isugu xiro fiilooyinka markii qalabka la wareejinayo.
Waxa jira laba budo oo miisaamaya miisasyo (sibidh, dambaska duqsiga), hal biyo oo miisaanka lagu cabbiro, laba dareere cufan oo miisaankeedu yahay miisas iyo hal wadar oo wadar goobeed lagu kaydiyo ayaa lagu dhejiyay lakabka miisaanka miisaanka culus. Dhammaan miisaanka ayaa korsada dareemayaal sax ah, rakibid fudud, hagaajin habboon iyo adeegsi lagu kalsoonaan karo. Meesha laga soo saaro budada miisaanka miisaamaysa waxay qaadataa waalka balanbaalista pneumatic ee iswada lagu xakameeyo, isku xirnaanta jilicsan iyo xirnaanshaha buuxa ayaa laga qaataa barta laga soo galo iyo meesha laga baxo. Huufarka miisaanka cufan ee cufnaanta ayaa lagu dhajiyay dusha sare ee mitirka biyaha, marinku wuxuu qaadanayaa birta birta ee birta ah ee birta ah si ay u soo saaraan maaddada.
Wadarta ayaa ah qiyaasta la ururiyey ama hal cabir ee miisaanka elektarooniga ah. Sibidhka, biyaha iyo waxyaabaha lagu daro waxay miisaamayaan hoppers cabir sax ah leh, PLC xakamaynta meel dhexe, iyo hawlgal fudud. Isku-darka waxaa loo gudbiyaa oo lagu quudiyo suumanka. Hadday tahay cabbirka wadarta, budada ama biyaha, xawaaraha sambalku wuxuu ka badan yahay 120 jeer ilbiriqsi kasta, saxsanaanta iyo kalsoonida cabbirka waxaa xaqiijiya dareemayaal saxsan oo sarreeya. PLC xakamaynta dhexe, si toos ah ama gacanta ayaa loogu shaqeyn karaa. Marka kumbuyuutarka warshadaha ama PLC uu ku guuldareysto inuu xakameeyo wax soo saarka caadiga ah ee warshadda isku dhafka ah, badhamada hawlgalka gacanta ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu gaaro hawl gacanta si looga fogaado khalkhal soo saar. Hawlgalku waa mid fudud oo fudud in la barto. Bandhigga firfircoon ee muuqaalka ayaa si cad u fahmi kara xaaladda hawlgal ee qayb kasta, wuxuuna keydin karaa oo daabici karaa xogta warbixinta (daabacaadda stylus, quadruplicate), taas oo siisa ku habboonaanta maaraynta qorshaha wax soo saarka. Waxay ku qalabeysan tahay laba nidaam kormeer oo loogu talagalay la socodka waqtiga-dhabta ah. Xaaladda wax soo saarka.
Qaybaha ugu muhiimsan ee korantada ee mashiinka, mashiinka wax lagu dhejiyo, dareeraha cabbiraadda, qeybaha xakamaynta hawada iyo nidaamka xakamaynta ayaa ah dhammaan noocyada la soo dhoofiyo, taas oo kaliya aan si weyn u yareynaynin heerka qaladka qalabka, laakiin sidoo kale hagaajinaya saxnaanta cabirka qalabka.
Maxay yihiin qeybaha uu ka kooban yahay warshad isku qaseysa mobilada?
1 Mashiinka Mashiinka:
Mashiinka qasacadaysan ee mashiinka weyn, kaas oo ka kooban pin cagaf ah iyo lug la dhigto gaariga weyn; Cabbirka cabbirka ee makiinadda, sibidhka iyo biyaha, shamac ku dul yaal shaashadda. Soo ag dhig miiska roondada, jaranjarada iwm.
2 Qolka xakamaynta:
Qolka koontaroolku wuxuu ku yaal salka hoose ee mashiinka wax lagu qaso, iyo geedka isku-dhafka ah ee nidaamka si otomaatig ah u kontaroola ayaa lagu rakibay gudaha. Qolka xakamaynta wuxuu u adeegaa barta hore ee taageerada geedka oo dhan markuu shaqeynayo. Marka la wareejinayo ama la rarayo, qolka kontoroolka waa la adkeeyay oo waxaa lagu keydiyey godka qaybta; dhammaan khadadka xakamaynta uma baahna in la kala jaro.
3 Qiyaasta wadarta:
Nidaamkani wuxuu ku yaalaa dhamaadka dambe ee saldhiga isku dhafka la dhaqaajin karo, qaybta sare waa wadarta (ciid, dhagax) hop kaydinta, hoip kaydinta waxaa loo qaybin karaa 2 ama 4, oo loo sameeyaa guddi sare si loo kordhiyo awoodda keydinta, oo pneumatic si isdaba joog ah fur shaqada qolka, cabirka wadarta cabiraada alaabada noocyadeeda kala geddisan. Salku wuxuu ku qalabeysan yahay buundo gadaal socod ah iyo lugaha jir si ay u shaqeeyaan.
4 Qaybaha durugsan:
Siinka sibidhka iyo gawaarida wareejinta, qaybaha durugsan waa qaybo muhiim ah iyadoon loo eegin shaqo ama gaadiid, sidaa darteed waa la qaadi karaa oo la kala qaadi karaa guud ahaan iyada oo aan la kala bixin.
▶ Maxay yihiin astaamaha ugu waaweyn ee warshad batching la taaban karo oo guurguura?
Muuqaalka weyn ayaa ah inuu dhaqaajin karo gebi ahaanba. Waqtigan xaadirka ah, xarunta isku dhafka shubka la dhaqaajin karo ayaa inta badan loo qaybiyaa nooca jarista iyo nooca jiidaha, jiinka nooca jarjarka wuxuu ka kooban yahay buundo hore iyo gadaal oo dhameystiran; , iyadoo dhamaadka hore lagu dulsaaray buundada saddexda cagaf cagaf.
Mashiinka Dufcaanta Isugeynta, Isugeynta Nidaamka Dufcadda, Nidaamka Qiyaasta Wadarta Wadarta, Qaybo ka Mashiinka Mashiinka la taaban karo, Automatic Wadar Dufcaddii Bacriminta fiicni, Nidaamka isugeynta wadarta otomaatiga ah,